မာရီးယားကို ကိုးကွယ်သူဟူ၍ ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များကို စွပ်စွဲပြောဆိုခြင်းမပြုမီ သင် လျစ်လျူရှုခဲ့မိသော အကြောင်းအရာ ၅ ခု | Radio Veritas Asia
မာရီးယားကို ကိုးကွယ်သူဟူ၍ ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များကို စွပ်စွဲပြောဆိုခြင်းမပြုမီ သင် လျစ်လျူရှုခဲ့မိသော အကြောင်းအရာ ၅ ခု
၁။ ဘုရားသခင်က မာရီးယားအားဖြင့် ကယ်တင်ရှင်ကို စေလွှတ်ခဲ့တယ်။
(God Sent The Saviour Through Mary.)
အချိန်အကြာကြီး စောင့်မျှော်ခဲ့ရတဲ့ မက်ဆီးယားကယ်တင်ရှင်ဟာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကနေ ဖွားမြင်ခြင်း အားဖြင့် ဒီလောကကမ္ဘာကို ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ မာရီးယားပဲဖြစ်တယ်။ "သင်သည် ပဋိသန္ဓေစွဲယူ၍ သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်လိမ့်မည်။ ထိုသားကို ယေဇူးဟူ၍ မှည့်ခေါ်ရမည်"(ရှင်လုကာ ၁:၃၁)။
ယေဇူးခရစ်တော်ဟာ ဒီကမ္ဘာမြေကို တခြားနည်းလမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ လာခဲ့လို့ရရက်သားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ မာရီးယားကိုမှ ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ။ မာရီးယားဟာ ယေဇူးသခင်အတွက် အဲဒီလောက်တောင်မှ အရေးပါနေရင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကော အရေးမပါဘဲ နေပါ့မလား။
၂။ ယေဇူးသခင်က သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံး အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာကို မာရီးယားရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
(Jesus Performed His First Miracle At Mary's Request.)
"သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ဂါလိလဲပြည် ကာနမြို့တွင် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကို ခံကြစဉ်၊ ထိုပွဲ၌ ယေဇူး၏မယ်တော်ရှိ၏။ ယေဇူး နှင့် တပည့်တော်တို့ကိုလည်း ထိုပွဲသို့ ခေါ်ပင့်ကြ၏။ စပျစ်ရည် ကုန်သောအခါ ယေဇူး၏မယ်တော်က စပျစ်ရည်မရှိဟု ကြားပြော၏။ မယ်တော်ကလည်း သူစေခိုင်းသမျှ ပြုကြလော့ဟု အစေခံတို့အား ဆိုလေ၏"(ရှင်ယောဟန် ၂:၁ - ၃၊ ၅)။
တကယ်တော့ ကာနမြို့လက်ထပ်ပွဲမှာ ရေကို စပျစ်ရည်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက် ခရစ်တော်ဘုရားရှင်က မာရီးယားကို မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ယေဇူးခရစ်တော်က မယ်တော်မာရီးယားရဲ့ကြားဝင်တောင်းလျှောက်ပေးခြင်းကို ပြသချင်လို့ မာရီးယားရဲ့တောင်းဆိုမှုကို စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ ယေဇူးဘုရားရှင်က လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်ကနေ မာရီးယားကို ရှင်ယောဟန်ထံ ပေးအပ်ခဲ့တယ်။
(Jesus Gave Mary To John From The Cross.)
"ထိုအခါ မယ်တော်နှင့် ချစ်တော်မူသောတပည့်တော်သည် အနားမှာ ရပ်နေသည်ကို ယေဇူးသည် မြင်တော်မူလျှင် မယ်တော်အား အချင်းမိန်းမ သင်၏သားကိုကြည့်ပါဟူ၍၄င်း၊ တပည့်တော်အားလည်း သင်၏အမိကို ကြည့်ပါဟူ၍၄င်း မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါမှစ၍ ထိုတပည့်တော်သည် မယ်တော်ကို မိမိ၏အိမ်၌ သိမ်းထား၏"(ရှင်ယောဟန် ၁၉:၂၆-၂၇)။
ဘာဖြစ်လို့ ယေဇူးဘုရားရှင်က ကားတိုင်ပေါ်မှာ တွဲလောင်းဆွဲချိတ်ခံနေရတုန်း ဒီစကားတွေကို ကြိုးစားပြောနေရတာလဲ။ ရည်ရွယ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိလို့ကတော့ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်က ဒီစကားတွေကို ပြောထွက်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်တော်ဘုရားရှင် လုပ်ခဲ့၊ ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေမှာ အကြောင်းခြင်းရာ တစ်စုံတစ်ရာရှိနေခဲ့တာ သိသာထင်ရှားလှပါတယ်။ ကက်သလစ်အသင်းတော်က ရှင်ယောဟန်ဟာအသင်းတော်သူ၊ အသင်းတော်သားတစ်ဦး ချင်းစီကို ကိုယ်စားပြုနေတယ် ဆိုတာရယ်၊ အဲဒီတဒင်္ဂအချိန်မှစပြီး မာရီးယားဟာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရဲ့ဝိညာဉ်ရေးမိခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကို အမြဲ ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ သမ္မာကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောထားခဲ့တာကတော့ ထိုနေ့ရက်အချိန်ကစပြီး ရှင်ယောဟန်က ယေဇူးခရစ်တော်ရဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ အမိမယ်တော်မာရီးယားကို လက်ခံရယူပြီး မိမိရဲ့အိမ်မှာ သိမ်းထားခဲ့ပါတယ် (ရှင်ယောဟန် ၁၉:၂၇)။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း အဲဒီအတိုင်း လုပ်လိုက်ရင် မကောင်းဘူးလားခင်ဗျ။
၄။ ယေဇူးဘုရားရှင်ရဲ့ အရင်ဦးဆုံးကျေးဇူးတော်တွေဟာ မာရီးယားအားဖြင့် ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
(Jesus' First Graces Were Given Through Mary.)
ကယ်တင်ရှင်ရဲ့မိခင်ဖြစ်ဖို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာ မာရီးယားဟာ ဆွေမျိုးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဧလိရှဗက်ဆီ အကြည့်အရှုသွားရောက်ဖို့ အလျန်အမြန် ခရီးထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။ "ထိုနှုတ်ဆက်စကားကို ဧလိရှဗက်သည် ကြားစဉ်တွင် မိမိ၏ဝမ်း၌ရှိသောသူငယ်သည် ခုန်၍ မိမိသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝလျက်ရှိ၏"(ရှင်လုကာ ၁:၄၁)။ ဒီကျမ်းပိုဒ်အရ ယေဇူးခရစ်တော်မမွေးဖွားခင်မှာတောင် မာရီးယားရဲ့အသံဟာ ဧလိရှဗက်ထံမှာ ကျေးဇူးတော်ရရှိဖို့ အသုံးပြုတာ ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဧလိရှဗက်ပြောခဲ့တဲ့ သမ္မာကျမ်းစာထဲက တိုက်ရိုက်စကားလုံးကို နားထောင်ကြည့်ပါ။
"သင်၏နှုတ်ဆက်ခြင်းစကားသံကို အကျွန်ုပ်ကြားစဉ်တွင် အကျွန်ုပ်၏ဝမ်းထဲ၌သူငယ်သည် ရွှင်မြူးသောစိတ်ဖြင့် ခုန်၏"(ရှင်လုကာ ၁:၄၄)။
ဧလိရှဗက်ထံမှာ ကျေးဇူးတော်စီးဆင်းဖို့ မာရီးယားရဲ့ရှိနေခြင်း၊ မာရီးယားရဲ့အသံဟာ အရေမပါပါဘူးလို့ ငြင်းပယ်ဖို့ အတော် ကို ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို ကျေးဇူးတော်က မာရီးယားထံမှ မြစ်ဖျားခံခဲ့တာလား။ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျေးဇူးတော်တွေဟာ ယေဇူးဘုရားရှင်ထံမှ လာတယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားလွန်းနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်က မာရီးယားကို ခရီးထွက်စေခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတော်တွေ ရရှိဖို့ သူရဲ့အသံကို ရွေးချယ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခရစ်တော်က မယ်တော်မာရီးယားဟာ nအရေးပါအရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို သတိရအောက်မေ့ စေချင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ယေဇူးခရစ်တော်ဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ လူသားများစပ်ကြားမှာ အဓိကကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးသူဖြစ်တယ်။
(Jesus Christ Is The Sole Mediator Between God and Man.)
ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေကတော့ "ယေဇူးခရစ်တော်ဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ လူသားများကြားမှာ အဓိက ကြားဝင် ဖြန်ဖြေပေးသူ ဖြစ်တယ်" ဆိုတာကို အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်လက်ခံကြပါတယ်။ဒါကိုလည်း ကက်သလစ်အသင်းတော်ရဲ့
မြတ်သောအယူဝါဒစာအုပ်၊ နံပါတ်(၂၆၃၄)မှာ ဒီယုံကြည်ချက်ကို အတိအလင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ " ကြားဝင်ဆုတောင်း ခြင်းသည် ယေဇူးသခင်ဆုတောင်းသကဲ့သို့ ဆုတောင်းစေသောတောင်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်နှင့် လူအားလုံး အထူးသဖြင့် အပြစ်ရှိသူများကိုယ်စား တစ်ဦးတည်းသော ကြားဝင်တောင်းလျှောက်ပေးသူဖြစ်သည်"။
ဒီကက်သလစ်ဘာသာသွန်သင်ချက်ဟာ အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့် အထောက်အကူပြုထားပါတယ်။
"ဘုရားသခင် တစ်ဆူတည်းရှိတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်နှင့် လူတို့၏စပ်ကြားမှာ လူဖြစ်သော ယေဇူးခရစ်တော်တည်းဟူသော အာမခံတစ်ဦးတည်းရှိ၏။ ထိုအာမခံသည် လူအပေါင်းတို့ကို ရွေးအံ့သောငှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စွန့်တော်မူပြီ" (တီမောသေသြဝါဒစာပထမစောင် ၂:၅-၆)။ ယေဇူးခရစ်တော်ဟာ ဘုရားသခင်နှင့် လူသားတွေစပ်ကြားမှာ အဓိက ကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးသူဖြစ်နေပေမယ့်လည်း အဲဒီအရာက မာရီးယားအပါအဝင် တခြားသောသူများရဲ့ကြားဝင်ဖြန်ဖြေ ဆုတောင်းပေးခြင်းကိုတော့ မတားဆီးပါဘူး။
အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်ကို ရေးသားခဲ့တဲ့ ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်တောင်မှ သူရဲ့စာဖတ်သူတွေကို တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန် ဆုတောင်းပေးကြဖို့ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်(ရောမသြဝါဒစာ ၁:၉၊ သက်သာလောနိတ်သြဝါဒစာ ပထမစောင် ၅:၂၅၊ တီမောသေသြဝါဒစာပထမစောင် ၂:၁)။ အဲဒီလို ကြားဝင်ဆုတောင်းပေးမှုကို ကက်သလစ်အသင်းတော်ရဲ့ မြတ်သောအယူဝါဒကလည်း " ခရစ်တော်၏ကြားဝင်ဆုတောင်းပေးမှုမှာ ပါဝင်ခြင်း"(နံပါတ်၊ ၂၆၃၅)အဖြစ် ညွှန်းဆိုခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လည်း အချိန်တိုင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆုတောင်းပေးတဲ့နေရာမှာကျင့်သုံးလျက်ရှိနေကြပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကြားဝင်ဖြန်ဖြေဆုတောင်းပေးဖို့ မယ်တော်မာရီးယားကို ပန်ကြားလျှောက်ထားခြင်းဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ယေဇူးခရစ်တော်ရဲ့ ဘုရားသခင်နဲ့လူသားများကြားမှာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဌကို ဖယ်ရှားပစ်နေခြင်းမဟုတ်နိုင်ပါဘူး။
[မူရင်း။ Gary Zimak ၏5Facts You Ignore Before Accusing Catholics of "Mary Worship" ကို အတိုချုံး၍ ပြန်ဆိုခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။] မျိုးကြဲသူစာစောင်(စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်)